सुनको मूल्यमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड, आजपनि बढ्यो ! « Postpati – News For All
सुनको मूल्यमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड, आजपनि बढ्यो !
साउन १२, काठमाडौं | पछिल्लो केहि समय यता नेपालमा सुनको मूल्यले दिनहुँ नयाँ रेकर्ड कायम राख्न थालेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार ९६ हजार ३ रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य एकैदिन १२ सयले बढेर सोमबार ९७ हजार ५०० सय कायम नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
नेपाली बजारमा यो मुल्य हालसम्मकै उच्च हो | यस्तै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ | चाँदी आज प्रतितोला १२ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गएको महासंघले जनाएको छ ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सुरक्षित लगानीको क्षेत्र भन्दै लगानीकर्ताले लगानी गर्न थालेपछि मूल्य निरन्तररुपमा उकालो लाग्दै आएको छ । व्यवसायीका अनुसार सुनलाई सुरक्षित लगानी मानिन्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिने अस्थिरता, आर्थिक संकट र युद्धका बेला लगानीकर्ता सुरक्षित हुन खोज्छन् । अन्य क्षेत्रको लगानी झिकेर सुनमा बढाउँदा मूल्य बढ्नु गएको व्यवसायीको भनाई छ ।
कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रलाई नै शिथिल बनाएको छ । यस्तै हङकङका कारण चीन र अमेरिकाबीच उत्पन्न तनाव पनि सुनको मूल्य बढ्नुको अर्को कारण रहेको शाक्यको भनाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २ हजार डलर पुग्दा यहाँ प्रतितोला करिब १ लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने महासंघको दाबी छ ।
१२ श्रावण २०७७, सोमबार को दिन प्रकाशित